Mitsangàna Book Excerpt: 7:00 A.M. Logic — Trip LEE - OFISIALY SITE
Aho niresaka tamin'ny lehilahy zokiolona izay hajaina indrindra, Faly be ny manazava ny lalao drafitra ho an'ny hanome voninahitra an'Andriamanitra miaraka amin'ny fomba fiainako, manokana ny firaisana ara-nofo ny fahadiovana. Niezaka ny ho tony momba izany, saingy sarotra ny mihazona hatrany ny fientanentanana eo amin'ny. Dia tahaka ny teny amin'ny lelako niantoraka amin'ny iray voajanahary haingana, I nahazo ny heviny fa tsy ho faly tahaka aho. Izy dia miezaka ny hihaino amim-pahanginana, fa ny endrika talohan'ny teny Namaly vavany nanana vintana. Toa antenatenan'ny miharihary amin'izany ary nisasaka voakasika.
Nomeny ahy ny sahiran-tsaina sy tony fijery nanontany, "Nahoana no maka izany ho zava-dehibe ny fiainana, tovolahy? Nahoana no miezaka mafy mba hanao ny zava-drehetra tsara? Tanora no fotoana rehefa mikorontana ny be dia be, ary maninona. Just mifalia, mianatra avy amin'ireo fahadisoana, ary mahazo lehibe rehefa mahazo taona. "
Gaga aho. Mety ho naka izay toro-hevitra ny fanafahana sy ny manao ny marina, fa tsy fomba nahatsapa ho ahy. Tsy nahatsapa nanery sy mamitaka. I nahalala ihany izay efa nanao ratsy, fa izaho dia Kristianina vaovao ary tsy afaka tena nataony ho teny.
Nieritreritra aho fa ny zava-nitranga nandritra ny fotoana ela, fa raha tokony dampening ny afo, Mihevitra aho fa avadika ny hafanana. Tsy fantatro loatra tamin'ny fotoana, nefa fantatro fa tsy afaka mipetraka manodidina fotsiny, ary miandry. Tsy maintsy mifoha ka ho velona.
NY diso lojika
Mifoha no toerana tena ampahany kely indrindra isan'andro. Tsy hoe tsy mankasitraka ny andro vaovao amin'ny fahafahana vaovao, fa nahazo eo am-pandriana fotsiny toa tsy manintona. Ever. Rehefa izany iraika ambin'ny folo amin'ny alina, mahazo am-pandriana dia ampahany tsotra fotsiny ny andro. Fa raha izany fito maraina, mitoetra ao am-pandriana dia toy nandresy tamin'ny loteria.
Raha mijery ny iPhone, aho, dia hahita fa, mampalahelo, Efa tokony ho enina ambin'ny folo fanairana teo amin'ny dimy ambin'ny folo minitra talohan'ny manomboka mitombo tsikelikely 7:00 a.m. Nahoana? Satria misy tsara tarehy tsy misy vintana be mifoha aho ny fahatelo ambin'ny folo taorian'ny fanairana. Ireo isa telo manaraka efatra ambin'ny folo, dimy ambin'ny folo, ary enina ambin'ny folo-no hany vintana ny tena manana andro.
Indraindray aho, mino aho hoe afaka handresy lahatra ny tenako ny na inona na inona tamin'izany rendremana voalohany minitra isa-maraina. Zavatra tsy tao ny ratsy indrindra nandritra ny oniversite taona, rehefa niakatra avy tao am-pandriana tamin'ny maraina nahatsapa toy ny fihanihana ny Tendrombohitra Everest tsy misy tongony. Dia afaka milaza ny tenako lainga isan-karazany, toy ny, "Eny, tokony handeha any am-pianarana, fa izany no tena zavatra?"Na" Fantatro fa efa nisy tara isan'andro ny telo herinandro, fa izay no andro hafa?"Na" Angamba ny namako dia haka ny fitsapana ho ahy. Tena mendrika ny mety. "Mampalahelo, fantatro. Izany no antsoiko hoe 7:00 a.m. lojika.
Ny lainga aho, hoy aho tao am-pandriana fa mijanona ho tsara ho ahy. Toa fanampiny dimy minitra na ora iray fanampiny dia hanatsara ny fiainako. Rehefa malalaka aho hifoha toa adala, fa tamin'izany fotoana voalohany ny andro tsirairay dia toa tsara lojika.
Azonao sary an-tsaina ny zavatra izao tontolo izao raha toa tsy misy olona nitsangana mandra-nahatsapa toy izany? Businesses dia aforeto, sekoly dia hijaly, ny governemanta ho nisafotofoto kokoa noho ny efa misy. Tsy misy olona mety hanana fotoana ampy mba hanao ny asa tsara; ny fotoana rehetra nifoha, ny antsasaky ny andro ho lasa. Ny marina dia, na inona na inona fotoana manapa-kevitra ny hitsangana avy amin'ny rendrehana, ianao ihany no ora efatra amby roa-hiasa amin'ny. Mikapoka ny snooze bokotra tsy tena mpividy misy fotoana fanampiny. Ny asa marina dia tsy mba atao.
Indrisy, dia maro amintsika no natsangana 7:00 a.m. lojika ho toy ny fomba fiaina. Isika indraindray hoe ny fangatahana andro. Tsy te hanao zavatra amin'ny fotoana, noho izany dia manapa-kevitra ny hametraka izany eny mandra-taty aoriana. Indraindray isika dia manao izany amin'ny zavatra madinika, toy ny maka ny fako, mianatra hanao fanandramana, asa namaly e-mail, na niverina Neny ny antso an-tariby.
Fa raha ny marina tsy hangataka andro mamaha na inona na inona, toy izany ny ratsy hevitra hanemotra isan'andro mandra-pahatongan'ny minitra farany. Tena iray aza ratsy kokoa ny fiainana hevitra hanemotra mihitsy.
AHOANA NY miandry?
Aoka isika ho marin-toetra. Ny kolontsaina dia tsy matetika loatra amin'ny olona manantena ry zareo mandra-antitra. (Aho mba tsy hanafintohina na iza na iza, ary aoka ianao mamaritra ny antitra.) Araka ny maro, ny tanora dia tsy ny fotoana andraikitra lehibe na ny fiandrasana. hoy izy ireo, "Ianao hitondra ny enta-mavesatra ny andraikitra noho ny sisa amin'ny fiainanao, ka hankafy ny fahatanoranao raha mbola azonao atao!"Toa mitaky ny handray ny fiainana rehetra ho afa-maina mandra-tanana isika fa ny mahagaga, jadona taona ny andraikitra. Moa valo ambin'ny folo? Moa amby roa-polo? Moa telo-polo? Ny Vina dia toy ny ahy.
Nanana Resadresaka mpandroso sakafo any Antseranana indray alina tsy ela loatra lasa izay. Tsy izy anefa no zandriny be noho ny ahy, angamba ny tany am-boalohany faharoapolo taonany. Tena sariaka izy avy ny fotoana dia nipetraka teo, ary nifarana ny manana fitondran-tena tsara. Nanontaniako azy ny mahazatra kely-lahateny fanontaniana: Avy aiza ianao? Mandra-pahoviana ianao niasa eto? Ve ianao rorany mandrakariva ny sakafo?
Ary raha namaly ny fanontaniana, dia mazava fa dia nihazona izany andraikitra izany novidiny an- 7:00 a.m. lojika. Nilaza tamiko izy fa efa afa-nipetraka tao Phoenix nandritra ny volana vitsivitsy. Talohan'ny fa tao an Nevada, talohan'izay California, ary ny eo anoloan'ny dia nonina teo amin'ny East Coast. Tamin'izay fotoana izay dia nanomboka nanontany tena ny fomba hamaritra azy aho ny polisy Sketch mpanakanto, sao izy dia nandositra ny karazana.
Ary rehefa nanontany azy aho hoe nahoana izy nifindra manodidina loatra, eto no nilaza tamiko izy: "Satria. Tsy te-hijanona amin'ny toerana iray, ary haka amin'ny bunch ny andraikitra. Tanora aho, olona. Izany fotoana fotsiny aho hijery, tsy ho revo amin'ny an amin'ny bunch ny fanoloran-tena. Iza no mahalala, angamba aho hahita ny tenako. "
Nalahelo aho, nefa tsy gaga tamin'ny valin-. Mazava ho azy fa misy na inona na inona ratsy ny mifindra be na ny tena-baovao, fa misy ny vanim-potoana eo amin'ny tany am-boalohany faharoapolo taonany, na ny tanora, rehefa tsy tena fiainana manao zavatra? Tokony tsy hanao zavatra rehetra faharesen-dahatra, fanoloran-tena, sy ny fahamendrehana raha taty aoriana?
Azonao itokisana AZY?
Dia nandre hira ny andro hafa izay voasambotra io fomba fijery tsara. The Lyric nandeha, "Faly izahay, maimaim-poana, sahiran-tsaina, ary nanirery tamin'izany andro izany. "
Fantatro nitondra ny Taylor Swift tsy lasa tsara ho an'ny olona tany aloha (no tokony hampahatsiaro anareo ny Kanye?). Fa vonona aho ny handray ny risika sy handinika izay hoy izy ao amin'ny ny hira "22." Fantatro fa mahafinaritra fotsiny hira, ka tsy te-overanalyze izany. Mino aho fa izy no voasambotra soa aman-tsara ny fihetseham-pon'ny mpihaino azy sy ny fanahin'ny ny taona. Fa ny fomba fijery no diso rehetra.
Inona no dikan'izany, raha hoy izy ao amin'ny hira, ny "mahatsapa roa amby roa-polo"? Ny hira mankalaza ny karazana mivaky loha, fahazavana, ary mora lasa olon-dehibe tanora maro amintsika fa nanonofy momba ny. Indrisy, dia manolo-kevitra fa io fahasambarana sy ny fahalalahana no hita ao amin'ny sahiran-tsaina, indraindray fadiranovana nivahiniany. Tsy misy tari-dalana, Tsy andraikitra fotsiny nisafotofoto-fahafinaretana. Izany hoe 7:00 a.m. lojika indray. Iza no manana ny fiainana fotoana rehefa mahatsapa roa amby roa-polo? Faingan-tongotra tsy manao io fomba fijery ny; efa namidy izahay lojika izany hatrany hatrany. Fa azo itokisana?
Na izany na tsy 7:00 a.m. lojika dia mendri-pitokisana dia miankina amin'ny hoe iza ianao ary inona no namoronana anao ho. Raha ireo ihany no natao ho an'ny tena afa-po sy fifaliana, dia fanesorana tena fiainana mandra-tatỳ aoriana mba ho ny tsara indrindra safidy. Raha toa ianao na inona na inona mihoatra noho ny olona hafa mitady ho an'ny tenanao, dia izay tanora ny lojika mpandroso sakafo mety ho toa tsara tarehy feo. Afaka miandry tatỳ aoriana mba hifoha raha te-. Ahoana anefa raha namoronana anao noho ny zavatra hafa?
*Ity ny ampahany avy amin'ny toko voalohany amin'ny boky vaovao Trip, Mitsangàna. Aza adino, rehefa mialoha mba Mitsangàna amin'ny Janoary 26, ianao hahazo ny bunch ny fanomezana maimaim-poana, anisan'izany ny tombony lalana izay tsy ho eo amin'ny tahirin-tsary. Ireto ny tsipiriany rehetra mba hanavotra ny fanomezam-pahasoavana: http://risebook.tv/preorder
manan-danja • Janoary 8, 2015 amin'ny 1:18 PM • navalin'i
Misaotra woow alot Mr Trip Lee noho izany… Nanao fanapahan-kevitra izany ho an'ny 2015 fa nony alina dia hifoha amin'ny 3 ary ny marina foana aho hifoha aho fa tsy azo antoka Masìna hampionona ny tenako aho, matetika amin'ny hoe ny taona dia mbola tanora aho hoe ny olona dia mbola nandefa ny fiarahabana taom-baovao sambatra dia mieritreritra fotsiny aho 20 aoka hiandry rehefa pm 30 ary manana fianakaviana, ankizy, asa sy ny vadiny dia ho alot mba hivavaka ho an'ny… Fa isaorana noho io lahatsoratra io ny fomba tiako aho dia afaka mahazo ny boky manontolo koa toa tena ahalalan-javatra. .. Andriamanitra anie hitahy anao ihany !! :-)
Yolanda DeLaCerda • Janoary 8, 2015 amin'ny 1:31 PM • navalin'i
Izany no tena hoe iza moa aho amin'izao fotoana izao! Mampalahelo fa, fa tsy mila afenina. Iray aho Neny, fotoana feno mpianatra, manana fandraharahana madinika, amin'izao fotoana izao tehina ho an'ny mpitarika fiangonana iray izahay tamin'ny Septambra nambolena 2014 (staff handraisam-bola), sy ny asa ny fotoana anjara ao an-trano iray azo antoka ho an'ny zatovovavy izay niharan'ny firaisana ara-nofo sy ny fanondranana olona eny na dia rehefa avy namaky ny zavatra ataoko mino aho fa ianao efa reraka! Sahiko ny tenako am-pandriana isaky ny alina talohan'ny mba hifoha, fara fahakeliny, ny 5:00 a.m. ka nampitsangana ny fanairana rehetra ..(Eny REHETRA tiako holazaina ny dimy tamin'ny findaiko, ary avy eo ny olona izay manana fifandraisana)mandrakariva 5:45, 6:00, 6:15, 6:30, ary 6:45…Amin'ny firy araka ny eritreritrao Nifoha aho androany?!? 7:00!!! Eny, Fantatro aho dia kamo… Fa tena reraka aho…angamba be loatra teo amin'ny vilia, izany aho handeha hanapaka ny zavatra sasany teo amin'izao fotoana izao, fa amin'ny farany ny lahatsoratra ity dia tena marina. I ho fomba vokatra kokoa amin'ny zavatra rehetra aho anjara amin'ny, tena zava-dehibe dia afaka manome fotoana bebe kokoa an'Andriamanitra. Inona no tena adaladala tokoa ny handany ny fotoana sarobidy toy izany. Mitovy amin'ny 25 taona( Izaho dia 25) na dia ho toy ny 30 na 40 taona tokony ho velona amin'ny tanjona andavanandro, satria isika manana ny iray, miaina isan'andro tsy rava sy hizara ny teniny ary hanaiky fotoana rehetra azo atao mba hitombo ao Aminy amin'ny alalan'ny fiainana isan'andro. Misaotra mizara sy miandrandra ny fampisehoana in Orlando!!!
Mindy • Janoary 8, 2015 amin'ny 1:45 PM • navalin'i
Ity lahatsoratra ity dia tonga amin'ny fotoana tonga lafatra, tahaka ny taom-baovao ny fanapahan-kevitra dia ho bebe kokoa mifehy, manokana kokoa ny mifoha maraina, ary ho ao amin'ny Tenin'Andriamanitra isan'andro ka ny fiainako dia voaova anilany mandrakariva. Misaotra anao noho ny fampaherezana!
hanao • Janoary 8, 2015 amin'ny 1:59 PM • navalin'i
tsara Andriamanitra. Taloha herinandro alohan'ny nanomboka niverina an-tsekoly ho an'ny 5 taona Zanaka ary dia niverina an-trano tsy ho amin'ny Neny ny fety (na dia fahavaratra) isa-maraina ny 'mifoha aho amin'ny 20 minitra,’ na na inona na inona ny fialan-tsiny, ary mety ho namely ny snooze bokotra. Eo anatrehako nitsangana aho noho ny asa aho, efa nikasa ny andro iray manontolo ka nandresy lahatra ny tenako ny antony izany dia hanampy fanampiny matory fa ny fotoana tsirairay dia mety handratra ahy ny hijanona ao am-pandriana, fa tsy fanampiana. Maro nitranga in 2014 ary namely ambany vatolampy ratsy! Velom-pankasitrahana fotsiny aho efa nampahafantarin'Andriamanitra ahy ny famindram-pony sy ny fahasoavany mba hanorina indray ny fiainako, ary manomboka eo dia ho hitanao ny tanjona ananany ho ahy eto an-tany, satria tsy mendrika izany. Ny hoe mifanaraka bebe kokoa amin'ny famakiana ny teny sy miezaka hahatakatra ny Tompontsika sy Mpamonjy antsika i Jesoa no velona teny dia milaza amintsika fa hakamoana, matory, sns. rehetra hitarika ho amin'ny fahantrana, fahavoazana, ary na dia ny fahafatesana. Be dia be ny fahotana no Azom-pahoriana mandritra ny fiainako sy ny ho kamo, mahazo tory fa fanampiny kely no nanohana ahy niverina avy any amin'ny fiainana noho ny amiko Andriamanitra. Amin'izao androntsika izao dia mifoha 20 na 30 minitra eo anoloan 'ny fanairana, ary hihaino izany feo nilaza tamiko' mifoha maraina koa hanomboka ', na any am-piasana «Aza maka izany eny manao izany izao, dia mainka ezaka ho inona ny manao dia afaka manao tsaratsara kokoa.’ Efa niady ny Tompo ho ela loatra, ary manao zavatra hitako ny lalana mandeha hampitahotra ahy amin'ny fasana iray tany am-boalohany. Aho mbola tsy te-ho izay, fa efa nianatra ny manaiky ho amin'ny fanahy sy mihaino fotsiny na inona na inona aho rehefa steered hanao aho fa olona sady manana ny faniriana hiverina any lalako. Matahotra aho ny famelana an'Andriamanitra teo, Tsy mino aho hoe afaka manatanteraka ny fikasany momba ny famoronana, eny aho amin'izao fotoana izao, na manao tsara kokoa amin'izao fotoana izao, fa ahafahako ho tapaka isan'andro andro rehetra Andriamanitra-manaiky sy hanao ny anjara maha-Kristianina. Ny mahafinaritra ny mamaky sy mianatra azy io, fa ho ahy efa mampatahotra ny mieritreritra izay azoko atao tian'Andriamanitra foana aho ka handeha hiverina any aho hahazo miaraka ya Andriamanitra rahampitso satria misavorovoro ny androany. Olona namako nanosika ahy ela lasa izay hanova izay mihaino ary mampanantena fotsiny aho nanomboka nihaino anao nankany nandritra ny herinandro izao, ary ianao no efa nisy vokany teo amin'ny fiainako ny olona. I mankasitraka azy io, ary miala tsiny noho ny ela lahatsoratra fotsiny gotta milaza ya misaotra anao noho ny mozika sy ny sombiny mihoatra noho izany rehetra manampy ny ny fijoroako ho vavolombelona fa Andriamanitra dia tena misy ary na dia mahatsiaro ho manirery maha iray ray eto amin'izao lehibe fanjakan'i Georgia amin'ny maro ny olona, Andriamanitra dia hiasa amin'ny alalan'ny olon-kafa na fitaovam-piadiana ry zareo, na tsy mbola tonga hitsena en maintsy manalavitra ahy amin'ny lalana marina.
Leonel Arce • Janoary 8, 2015 amin'ny 2:35 PM • navalin'i
Ny mpanakanto manan-talenta iray ny rahalahiko dia miandrandra any amin anao I'm25 handeha ho 26 Mety toy izany manantena aho mampiasa ahy Andriamanitra amin'ny fomba mahery noho ny voninahitra sy harena miampy aho, te-hanao zavatra sy ny mpanakanto no hitory ny filazantsara amin'ny fomba izay tsy ara-pivavahana sy ny toa izany ry namana miova mandeha lasa fa azo havaozina sy voaova ary niova ho tsara kokoa satria izany feo anaty izany ao amintsika miteny milaza ireo avy teo, misy ireo toa antsika mitady ny antony ny zavatra tian'Andriamanitra ary mila amintsika. Misaotra noho ny fanaovana ity boky ity dia tsy afaka hiandry ny haka azy aho Manomboka mankasitraka azy io efa!
Joel • Janoary 8, 2015 amin'ny 3:28 PM • navalin'i
“Raha mijery ny iPhone, aho, dia hahita fa, mampalahelo, Efa tokony ho enina ambin'ny folo fanairana teo amin'ny dimy ambin'ny folo minitra talohan'ny manomboka mitombo tsikelikely 7:00 a.m. Nahoana? Satria misy tsara tarehy tsy misy vintana be mifoha aho ny fahatelo ambin'ny folo taorian'ny fanairana. Ireo isa telo manaraka efatra ambin'ny folo, dimy ambin'ny folo, ary enina ambin'ny folo no hany-fahafahana tena manana andro.”
Haha. Marina loatra. Manana olana toy izany koa. Good zavatra. I Mitady fatratra ny mamaky ny boky!
John • Janoary 8, 2015 amin'ny 4:03 PM • navalin'i
Nampirisika. Dia namely ny snooze mety bokotra fotoana be loatra. Te-hiaina ny fiainana izay manondro tsara Andriamanitra. Mila mivavaka sy hahazo drafitra ho ela. Misaotra anao, TL.
holli Simpson • Janoary 8, 2015 amin'ny 4:46 PM • navalin'i
Awesome! mihaino & nanaiky & mihomehy. Misaotra anao!
Valentin • Janoary 8, 2015 amin'ny 5:39 PM • navalin'i
Tiako io boky io. Izany ho ahy 18 taona kristiana mpanao rap avy any Makedonia.
Joanna • Janoary 8, 2015 amin'ny 9:54 PM • navalin'i
izany no tena marina sy lalina. Efa olana ny 7:00 a.m lojika indrindra satria manomboka amin'ny anjerimanontolo izay efa lasa sarotra kokoa ny mifoha ara-potoana.
Carl • Janoary 8, 2015 amin'ny 10:41 PM • navalin'i
ny fijoroanao ho vavolombelona karazana mampahatsiahy ahy ny tenako fony aho mbola tanora! Tena nahafinaritra ny fomba fijeriny momba ny fiainana!!!
Melyssa • Janoary 9, 2015 amin'ny 3:28 aho • navalin'i
im tsy mivazivazy, Nila namaky izany ratsy izany amin'izao fotoana izao. Miomana aho ho any amin'ny hafa firenena ho herintaona hanao asa fitoriana ka lazao ny olona momba an'i Jesosy, fa ny andro nialoha ny niala (izay izao ihany no 9,) efa feno ahy ao amin'ny 7:00pm lojika. Ny zavatra, anefa, fa isa-maraina, rehefa tsy hifoha ary farany matory tanteraka tara loatra, Aho dia tezitra amin'ny tenako! Fantatro fa manana izany 7:00pm lojika, nefa aho tsy maninona izany. Ry zareo ka tsy fantany izay tokony hatao mba hanova izany. Toy na dia rehefa tena no miezaka, Mbola tsy. Misaotra noho ny nanoratana ity, Trip. Fanamby aho.
BungansaPaul • Janoary 9, 2015 amin'ny 7:11 aho • navalin'i
Wow, tiako be izany soo. Wish afaka hahazo ny boky.
Brian Antony • Janoary 10, 2015 amin'ny 2:24 aho • navalin'i
Derao Andriamanitra! Tsy Andriko ny mamaky ny boky vaovao… Vao haingana aho no nanana hamindrana fo amin'ny 9/29/14, ary nisaotra an'Andriamanitra noho ny fitahiana isan'andro, ny teboka, toy ny boky farany ao amin'ny “Good Life” isika dia mirona hametraka na finoana sy matoky ny zavatra tsy misy dikany.. TAHIN'ANDRIAMANITRA! #Unashamed #116 #DontQuit #CantwaittoreadRise
Domeanica • Janoary 12, 2015 amin'ny 5:40 PM • navalin'i
Misaotra anao mitsoraka namela ahy ho sombiny ity avy amin'ny boky vaovao. Mino izany aho dia hanazava ny kolontsaina sy ny manombo-dresaka mihitsy aza. Fantatro ny sasany tanora kristiana izay antoka hankasitraka izany fomba fijery marina ihany koa. Andriamanitra anie hitahy sy mivavaka na inona na inona, fa ny fitahiana eto amin'ity ezaka.
Burton • Janoary 12, 2015 amin'ny 6:23 PM • navalin'i
Hmmm, 7:00 pm lojika… Tsy afaka milaza aho tsy mba tahaka izany! Ny famakiana izany no nahatonga ahy mieritreritra ny fotoana rehetra izay mifoha, jereo kely ny fotoana, ka ataovy hoe:, “6:00? Mino aho fa voalohany fanapahan-kevitry ny andro dia ho… mba hiverina hatory.” Tiako ny torimaso! tsy nandevozin'ny, fa tsy hanelingelina ahy. Milaza fa tsy tokony, “6:00? Mino aho fa voalohany fanapahan-kevitry ny andro dia ny mamaky ny Tenin'Andriamanitra sy mivavaka.” Misaotra anao noho ny fizarana izany diako. Tena faly noho ny boky, I Efa mialoha baiko izany!
Josh • Janoary 13, 2015 amin'ny 11:20 PM • navalin'i
Mahery zavatra Trip. Misaotra noho ny fizarana ny zavatra nataony ny Tompo ao am-ponao momba izany. Ny fanompoana no fitahiana ho maro, Tompo anie hitahy.
Emmanuella James • Janoary 29, 2017 amin'ny 12:24 PM • navalin'i
Tsara tarehy toy izany lahatsoratra. Toy izany aho be mpankafy ny mozika. Ny aingam-panahy ahy ny soo be. Ny mahita fa ianao sady bilaogera sady mpanoratra no saina-fitsofana, hatramin'ny roa aho ary efa nitady olona mba hijery hatramin'ny. Tena te afaka hahazo ny dika mitovy amin'ny bokinao.
KenaMuigai • Jona 16, 2018 amin'ny 2:11 PM • navalin'i
Wow! Ny namana mihaino ny mozika, ary nilaza tamiko izy Te azy. Fa azo antoka ny saina tsofina. Tena ianao, manao ny marina sy tsy misy mihitsy daroka momba ny kirihitra aminao. Efa aingam-panahy ahy loatra toy izany ary na aho 18 ary mahatsapa toy ny mandeha aho na aiza na aiza, misy fahamarinana be – manta manao ny marina – ary mijery ny teny avy atỳ aminareo aho fa tena ara-tsindrimandry sy vonona ny hiala ny bunch ny fahazaran-dratsy. Imma mifikira teo izany fanantenana fa misy zavatra tsara ho avy, indrindra fa tsy mino ny 7:00 a.m. lojika cuz afaka tanteraka aho ary mitantara ny zavatra aho miasa amin'ny. Misaotra!!
P.S. Miandrandra ny mahatahotra kokoa mozika! :)
Tsara ny andro Trip.